China White Steel Pipe Reducer ထုတ်လုပ်ရေးနှင့် စက်ရုံ |CZ IT
စံသတ်မှတ်ချက်-ANSI B16.9၊ EN10253-2၊ DIN2616၊ GOST17378၊ JIS B2313၊ MSS SP 75 စသည်ဖြင့်
အမျိုးအစား-ဗဟိုပြု သို့မဟုတ် အသွင်အပြင်။
လုပ်ငန်းစဉ်- ချောမွေ့စွာ သို့မဟုတ် ချုပ်ရိုးဖြင့် ဂဟေဆော်ခြင်း။
B16.9 Concentric Reducer
Steel Pipe Reducer အသုံးပြုမှုများ
Steel Pipe Reducer ၏ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်
အရွယ်အစား 1/2"-24" ချောမွေ့စွာ၊ 26"-110" ဂဟေဆက်သည်။
စံ ANSI B16.9၊ EN10253-2၊ DIN2616၊ GOST17378၊ JIS B2313၊ MSS SP 75 စသဖြင့်
နံရံအထူ SCH5S၊ SCH10၊ SCH10S ၊STD၊ XS၊ SCH40S၊ SCH80S၊ SCH20၊ SCH30၊ SCH40၊SCH၊60၊ SCH80၊ SCH160၊ XXS၊ စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်ထားပြီး စသည်တို့ဖြစ်သည်။
ရိုက်ပါ။ အာရုံစူးစိုက်မှု သို့မဟုတ် ထူးဆန်းသော
လုပ်ငန်းစဉ် ချုပ်ရိုးမရှိသော သို့မဟုတ် ဂဟေဆော်ထားသည်။
ပစ္စည်း အစွန်းခံသံမဏိ:A403 WP304/304L, A403 WP316/316L, A403 WP321, A403 WP310S, A403 WP347H, A403 WP316Ti, A403 WP317, 904L, 1.41401,1.4150,901,1.4301,1.4301၊
STEEL PIPE REDUCER ၏လျှောက်လွှာများ
ဓာတုဗေဒ စက်ရုံများနှင့် ဓာတ်အားပေး စက်ရုံများတွင် သံမဏိလျော့စက်ကို အသုံးပြုသည်။၎င်းသည် ပိုက်စနစ်အား ယုံကြည်စိတ်ချရပြီး ကျစ်လစ်စေသည်။၎င်းသည် ပိုက်စနစ်အား ဆိုးရွားသောအကျိုးသက်ရောက်မှု သို့မဟုတ် အပူပုံပျက်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးသည်။၎င်းသည် ဖိအားစက်ဝိုင်းပေါ်တွင် ရှိနေသည့်အခါ မည်သည့် ယိုစိမ့်မှုမှ ကာကွယ်နိုင်ပြီး တပ်ဆင်ရလွယ်ကူသည်။နီကယ် သို့မဟုတ် chrome coated reducers များသည် ထုတ်ကုန်၏သက်တမ်းကို ရှည်စေပြီး အခိုးအငွေ့လိုင်းများမြင့်မားမှုအတွက် အသုံးဝင်ကာ သံချေးတက်ခြင်းကို ကာကွယ်ပေးသည်။
အပေါ်နှင့်အောက်ခြေပိုက်အဆင့်ကိုထိန်းသိမ်းထားရန် eccentric reducers များကိုအသုံးပြုနေချိန်တွင် Concentric reducers ကို တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုပါသည်။Eccentric Reducers များသည် ပိုက်အတွင်းမှ လေများကို ပိတ်မိခြင်းမှ ရှောင်ကြဉ်ပြီး Concentric Reducer သည် ဆူညံသံများကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
သံမဏိပိုက်အလျှော့ပေးစက်၏ ထုတ်လုပ်မှု လုပ်ငန်းစဉ်
အလျှော့အတင်းများအတွက် စွယ်စုံထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်းစဉ်များရှိသည်။၎င်းတို့ကို လိုအပ်သော ဖြည့်ပစ္စည်းများဖြင့် ဂဟေပိုက်များဖြင့် ပြုလုပ်ထားသည်။သို့သော် EFW နှင့် ERW ပိုက်များသည် လျှော့ကိရိယာကို အသုံးမပြုနိုင်ပါ။အတုအပ အစိတ်အပိုင်းများ ထုတ်လုပ်ရန်အတွက် အအေးနှင့် အပူဖွဲ့စည်းခြင်း လုပ်ငန်းစဉ်များ အပါအဝင် မတူညီသော နည်းလမ်းများကို အသုံးပြုကြသည်။
1.Dimension တိုင်းတာမှုများ၊ အားလုံးသည် standard tolerance အတွင်း။
4. PT၊ UT၊ X-ray စမ်းသပ်မှု။
5. Third party စစ်ဆေးခြင်းကို လက်ခံပါ။
6.Supply MTC၊ EN10204 3.1/3.2 လက်မှတ်၊ NACE
7.ASTM A262 အလေ့အကျင့် E
1. အထပ်သားအိတ် သို့မဟုတ် အထပ်သားပြားဖြင့်ထုပ်ပိုးထားသည်။
4. သစ်သားအထုပ်အပိုးပစ္စည်းများအားလုံးကို မီးခိုးမထွက်ပါ။
ယခင်- Stainless Steel 45/60/90/180 Degree Elbow
နောက်တစ်ခု: White Steel Stub End
Butt Welded Tube Reducer
Eccentric Pipe Fitting ကို လျှော့ချပါ။
Eccentric Pipe Fitting Reducer
r Stainless Steel Eccentric Reducer
Stainless Steel လျှော့ချပေးသည်။
Weld/Weld Concentric Reducer
Wphy 65 ပိုက်လျှော့ကိရိယာ